DEGDEG: Siciid Cabdullaahi Dani oo Loo Doortay Hogaamiyaha Puntland. – Shabakadda Amiirnuur
DEGDEG: Siciid Cabdullaahi Dani oo Loo Doortay Hogaamiyaha Puntland.
January 8, 2019 9:35 am by admin Views: 124
Doorashada oo ay ku tartamayeen ilaa iyo 21 Musharax,waxaana Wareegga Saddexaad ee Doorashada isla soo gaaray Musharaxiinta kala ah Saciid C/lahhi Deni, General Asad Cismaan C/llaahi. Waxa ayna kala heleen Labada Musharax isla soo gaaray Wareegga Saddexaad ay kala heleen Codad kala ah.
Saciid Cabdullaahi Deni, waxa uu helayay Codad dhan 35. Asad Cismaan Cabdullaahi, waxa uu helay Codad dhan.31. Guddoomiyaha Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay in Madaxweynaha Cusub ee Puntland ee Hoggaamin doona Shanta sano ee soo socota uu yahay loo doortay Saciid C/llaahi Deni, kadib markii helay Codad gaaraya 35
Hoolka ay Doorashada ka socotay ayaa mar qura Sawaxan iyo Sacab is qabsaday kadib markii Guddiga Doorashada Madaxweynaha Puntland ay ku dhawaqeen in loo doortay Saciid C/llaahi Deni oo ah nin lagu yaqaano shisheeye kalkaalnimo.